Saturday December 06, 2014 - 10:48:49 in Wararka by Super Admin
Dowladda islaamiga ah oo kamid ah maamullada mujaahidiinta ee suuriya awoodda ku leh ayaa bilaawday xamlad dagaaleed jihaadi ah oo ay ku doonayso in wilaayada alkheyr ama deyruzuur uga daahiriso xummaanta nuseyriyadda ee mudada nusqarniga ah xoog ku
Telefeshinka afka carabiga ku hadla ee aljazeera ayaa baahiyay in dowladda islaamiga ay markale waxka bedeshay khariiradda maamulka suuriya kadib markii ay usoo xey-xeydatay dagaal nidaamka al-asad looga xureynayo gobol ay deganyihiin malaayiin muslimiin ah islamarkaana leh kaabayaasha dhaqaalaha suuriya ugu muhiimsan warbixin telefeshinka lagasoo daayay ayuu saxafiga warbixinta akhrinayay soo sardiyay khariiradda dagaalka cusub ee dowladda islaamiga Suuriya iyo meelaha mujahidiintu qabsadeen.
Dhammaan magaalooyinka gobolka waxaa horay u maamulayay mujaahidiinta waxa kaliya ee ka dhiman waa magaalada caasimadda ah ee deyruzuur oo uu ugu weynyahay garoonka melleteriga magaladaasi,mandiqadda sharqiyah ee bariga suuriya ayaa ah mandiqadda 2-aad ee wadanka ugu weyn waana gobolka ay kuyaalaan ceelasha shidaalka ee ugu waaweyn wadanka.
War rasmi ah oo kasoo baxay mujaahidiinta dowladda islaamiga ah waxaa lagu sheegay in mujaahidinti bilaabeen camaliyadda furashada mandiqadda sharqiyah.
Markii go’aankaasi uu kasoo baxay dowladda ayay dabaaldegyo waaweyn ka bilaawdeen magaalooyinka waaweyn ee wilaayadaas waxayna dadku iskusoo baxyo ku muujiyeen xureynta lafilayo ee magalada,camaliyadda deyruzuur waxaa lagu daah furay camaliyaadb istish-haadi ah oo ay fuliyeen mujaahidiin kaxaynayay gaadiid xamuul ah oo walxaha qarxa lagasoo buuxiyay.
Dagaallo culus ayaa gilgilay madaarka melleteriga deyruzuur tobaneeyo katirsan ciidamada cadawga ayay camaliyaddu gallaaftay kadibna mujaahidiinta ayay usuurtagashay in ay qabsadeen degmooyin iyo deegaanno muhiim ah oo difaaca 1-aad u ah garoonk melleteriga.
Gobolkan deyruzuur oo masaaxo ahan 5 jeer oo la-labajibaaray ka weyn wadanka lubnaan qabsashadiisa waxay ubaahantahay nafhurnimo iyo quwad iimaani ah uma baahna ciidan badan iyo hub culus sida ay sheegayaan saraakiisha ciidanka mujaahidiinta.
Jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan ayaa wali laga maqlayaa gudaha garoonka oo sida ay muuqata ku mintidayan cadawga,shabakadda Smartpress ayaa baahisay in diyaarad xamuul ah ay garoonka deyruzuur kasoo degtay waxaana loo malaynayaa in ay daadgureysay saraakiisha ciidanka melletteriga taasi oo macnaheedu yahay in nidaamku uu ka quustay difaacashad magaalada islamarkaana ciidanka nuseyriga ah uu ku dhaafay mujaahidiinta dabcan waa gowrac sugayaal.